Utopia: စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော P2P ဂေဟစနစ်သည် Linux | Linux မှ
Utopia: Linux အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗဟိုကျသော P2P ဂေဟစနစ်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်သည်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ IT Project တစ်ခု ၎င်းကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည် all-in-one နည်းပညာဖြေရှင်းချက် နှင့် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း ၎င်းကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ထားသည် DeFi ကမ္ဘာ့ဖလား ယင်းနှင့်အတူ GNU / Linux ကမ္ဘာ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားနာမည်က "Utopia" ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များ၏အတိုင်းအတာကိုအလွန်ကောင်းစွာရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
"Utopia"အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏ဖန်တီးသူများ၏အဆိုအရaဖြစ်သည် all in one kit ပါ လုံခြုံသော instant messaging၊ encrypt လုပ်ထားသော email ဆက်သွယ်မှု၊ အမည်မသိငွေပေးချေမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင် web browsing ကိုသုံးရန်။ ၎င်းအပြင်၎င်းကိုသုံးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်၎င်း၏ကောင်းမွန်သောငွေပမာဏကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း သုံး၍ ငွေရှာရန်ခွင့်ပြုသည် RAM မှတ်ဉာဏ် (4 GB) ရရှိနိုင်သောနှင့်သတ်မှတ်ထားသော public IP address
Adamant - အခမဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောအမည်မသိစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အခြားအရာများ
ဒီနယ်ပယ် အိုင်တီစီမံကိန်း ၎င်းသည်အလွန်ဆင်တူသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ယခင်လေ့လာစူးစမ်းထားသောမျှဝေထားသောဆင်တူမှုများထက်ပိုမိုကြံ့ခိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ခြင်းထွက်သွားရန်ပြောပါသည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ လိုအပ်ပါက၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူဖတ်နိုင်စေရန်ဤပရောဂျက်များ
"Adamant သည် blockchain နည်းပညာကိုအခြေခံသော open source instant messaging application တစ်ခုဖြစ်ပြီး Crypto ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် Cryptocurrency Exchange System (Exchange) အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ Adamant သည် blockchain နည်းပညာအောက်တွင်ဘက်စုံသုံး။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနှင့် Juggernaut, Sphinx နှင့်အဆင့်အတန်းကဲ့သို့အခြားသူများနှင့်ဆင်တူသည်။ Juggernaut, Sphinx နှင့်အဆင့်အတန်းသည် messaging applications များကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားစရာအားသာချက်များသာမက Blockchain နည်းပညာကိုအခြေခံထားသောကြောင့်ငွေပေးချေမှုယန္တရားတစ်ခုသို့မဟုတ်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနှင့်ရှိသည်။".
Juggernaut, Sphinx နှင့် Status: စိတ်ဝင်စားဖွယ်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များ
1 Utopia: လက်ငင်းစာတိုပို့ခြင်း၊ ငွေချေခြင်းနှင့်သီးသန့်ရှာဖွေခြင်း
1.1 Utopia ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 Utopia သည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအားအဘယ်အရာပေးသနည်း။
1.3 GNU / Linux တွင် Utopia ကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်ရမည်နည်း။
1.4 Mining Bot အကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်
1.5 Crypton (CRP) ၏အခမဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရရှိရန် faucet ကိုအသုံးပြုခြင်း
Utopia: လက်ငင်းစာတိုပို့ခြင်း၊ ငွေချေခြင်းနှင့်သီးသန့်ရှာဖွေခြင်း
ဒါကို developer တွေရဲ့အဆိုအရ DeFi စီမံကိန်း မိမိအခုနှစ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "Utopia" ၎င်းကိုအကျဉ်းချုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဖော်ပြသည်။
"တစ်ဦးက လုံခြုံသော instant messaging၊ encrypt လုပ်ထားသော email ဆက်သွယ်မှု၊ အမည်မသိငွေပေးချေမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင် web browsing တို့ကိုသုံးရန် All-in-one kit သို့မဟုတ်တစ်နည်းအားဖြင့်ချက်ချင်းစာတိုပေးပို့ခြင်း၊ ငွေပေးချေမှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်း toolkit"။
ပို၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးအသေးစိတ်နည်းလမ်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုထည့်သည် "Utopia" es:
"လွတ်လပ်မှု၊ အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောဆက်သွယ်ရေး၊ အမည်မသိငွေပေးချေမှုများနှင့်အမှန်တကယ်လွတ်လပ်ပြီးနယ်နိမိတ်မဲ့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုမရှိခြင်းကိုမြှင့်တင်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်တရားဝင် hoaxes များသည် Utopia ကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ မင်း Utopia ကိုသုံးတဲ့အခါ Big Brother ကမင်းကိုမကြည့်တော့ဘူး။
Utopia ဖြင့်သင်အွန်လိုင်းဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများနှင့် firewall များကိုကျော်လွှားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်အလိုရှိသည့်အခါသင်အလိုရှိသူမည်သူမဆိုနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Utopia ဂေဟစနစ်သည်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအာမခံသည်။ အသုံးပြုသူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာကိုထုတ်ဖော်။ မရပါ။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒေတာကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကကြားဖြတ်မဖတ်နိုင်ပါ။ အကောင့်ဒေတာအားလုံးကို Utopia အသုံးပြုသူရဲ့ local device ပေါ်မှာ encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ထဲမှာသိမ်းထားတယ်".
လုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်: ချက်ချင်းစာဝှက်ထားတဲ့စာသား၊ အသံနဲ့အီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးကိုရရှိဖို့နဲ့ကယ်ဖို့။
ပေါင်းစပ်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်၊ CryptoCards နှင့်ကုန်သည်များအတွက် API တစ်ခု: ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ငွေပေးချေမှုကို ပြုလုပ်၍ စုဆောင်းနိုင်သည် CryptonUtopia ၏ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ငွေကြေး ဂေဟစနစ်သည်ဒေါ်လာ ၁ တန်ဖိုးနှင့်တွဲထားသော Utopia USD (UUSD) ဟုခေါ်သောတည်ငြိမ်သော crypto ကိုသုံးသည်။
Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလဲလှယ်ရေးစနစ်ကို Utopia ပလက်ဖောင်း (Crypton Exchange) တွင်ပေါင်းစည်းထားသည်။သုံးစွဲသူများအားအမည်မသိနှင့်အလိုအလျောက်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အနိမ့်ဆုံးသို့မဟုတ်အခကြေးငွေမယူသောပုံစံ၊ အကန့်အသတ်မရှိအလိုအလျောက်ငွေထုတ်ခြင်း၊ ဆင်ဆာခုခံခြင်း၊ လူထုစကားပြောခန်းအင်္ဂါရပ်နှင့်သုံးစွဲသူများတုံ့ပြန်မှုကိုစစ်မှန်သောလေးစားမှုတို့ကိုပေးသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော P2P ကွန်ယက်: ဗဟိုဆာဗာများမရှိလျှင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီသည်ကွန်ယက်ရောက်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လွယ်ကူသောသတ္တုတူးဖော်ရေး- သုံးစွဲသူများအား Utopia သတ္တုတူးဖော်ရေး bot များကိုအွန်လိုင်းသုံးခြင်းဖြင့် cryptons များရရှိရန်နှင့်၎င်းတို့၏ GNU / Linux Operating System ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် Utopia Platform ကိုအသုံးပြုခြင်းမှငွေရစေသည်။
ရိုးရှင်းသော faucetWallet တစ်ခုလျှင်တစ်ကြိမ်ပေါင်းစည်းထားသော Idyll web browser ကို သုံး၍ Crypton (CRP) ကျပန်းအပိုင်းလေးကိုအနိုင်ယူနိုင်သော web interface ။
အမည်ဝှက်ကိုလေးစားသောဒီဇိုင်းUtopia သည် IP address နှင့်သူတို့၏အထောက်အထားများကိုထုတ်ဖော်မပြနိုင်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများ၏လုံခြုံရေးကိုအာမခံသည်။
uNS အကောင်အထည်ဖော်မှု: Utopia Platform အတွက်မူပိုင်အမည်ပေးစနစ်၊ အမှန်တကယ်ဗဟိုကျကျနှင့် uncensored registry ကိုထောက်ပံ့ပေးသောဂန္ထဝင် DNS နှင့်ညီမျှသည်။
ပေါင်းစပ်ထားသော Idyll browser ကို သုံး၍ လုံခြုံစွာကြည့်ရှုပါTor browser ကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပြီး Utopia ဂေဟစနစ်ကိုသွားလာရန်လွယ်ကူစေသည်။
လုံခြုံသောသိုလှောင်မှုနှင့်ကူးစက်ခြင်း256-bit AES encryption နှင့်မြန်နှုန်းမြင့် curve25519 တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်
GNU / Linux တွင် Utopia ကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်ရမည်နည်း။
နောက်တစ်ခုအတွက်ငါတို့သည်အစဉ်လိုက် screenshots များကိုပြလိမ့်မည် download, install, configure လုပ်ပြီးသုံးပါ ပလက်ဖောင်း၏ applications များ "Utopia"မရ။ သတိပြုရကျိုးနပ်သည်က၊ ဤလက်တွေ့ကိစ္စအတွက်၊ ငါတို့သည်ပုံမှန်အတိုင်းသုံးလိမ့်မည် Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
ပထမအဆင့်အနေနှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ၂ ထုပ်ကို download လုပ်ရပါမယ် Linux အတွက် "Utopia" မိမိအခုနှစ် တရားဝင် download အပိုင်းမရ။ ပထမသည်ဂေဟစနစ်၏ဂရပ်ဖစ် interface နှင့်ကိုက်ညီသောတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် multiplatform (ကို Windows, MacOS နှင့် Linux) ဒုတိယသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည် RAM မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ Mining bot ၎င်းအတွက်သာဖြစ်သည် Linux ကို.
နှစ်ခုလုံးကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့်သင်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
« Utopia »ဂေဟစနစ်၏ Graphical interface ကို install လုပ်ပါTerminal (console) တွင်အောက်ပါ command ကို သုံး၍
«sudo apt install ./Descargas/utopia-latest.amd64.deb»
« Utopia »ဂေဟစနစ်၏ graphical interface ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း: Applications Menu မှတဆင့်။
“ Utopia” ဂေဟစနစ်၏ဂရပ်ဖစ် interface ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုစတင်ပါ.
“ Utopia” ဂေဟစနစ်၏ဂရပ်ဖစ် interface ၏သတ္တုတွင်းအတည်ပြုခြင်း module
« Utopia »ဂေဟစနစ်၏သတ္တုတူးဖော်ရေး bot ကိုတပ်ဆင်ခြင်းTerminal (console) တွင်အောက်ပါ command ကို သုံး၍
«sudo apt install ./Descargas/uam-latest_amd64.deb»
"Utopia" Ecosystem Mining Bot ကိုအသုံးပြုခြင်းTerminal (console) တွင်အောက်ပါ command ကို သုံး၍
ပုံမှန် mode ကို- ပုံသေလမ်းကြောင်းနှင့်စနစ်သော့ချက်စာလုံးကို သုံး၍ ထုတ်ပေးသော public key (သို့) ID ၏လိပ်စာဖြစ်သည် Utopia ပိုက်ဆံအိတ် (uWallet).
«./uam --pk "palabra clave del sistema"»
အခြားရွေးချယ်စရာ mode: ပကတိလမ်းကြောင်းနှင့် system keyword ကို သုံး၍ ထုတ်ပေးသော public key ၏လိပ်စာ (သို့) ID ၏အမှတ်အသားဖြစ်သည် Utopia ပိုက်ဆံအိတ် (uWallet).
«/opt/uam/uam --pk "palabra clave del sistema"»
built-in Idyll browser ကိုသုံးပါ.
Mining Bot အကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်
၎င်းကိုသုံးရန်သတိပြုပါ Mining Bot များ၊ အနည်းဆုံးတစ်ခုကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ် RAM မှတ်ဉာဏ် (4 GB) ရရှိနိုင်နှင့်aအင်တာနက်လိုင်းကောင်း ရိုးရှင်းသောနှင့်အတူ အများပြည်သူဆိုင်ရာ IPမရ။ ၎င်းကိုကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအတွက်အကြံပြုသည်၊ ပလက်ဖောင်းကိုသုံးရန် graphical interface ကိုကွန်ပျူတာများနှင့်ကွန်ပျူတာများမှခွဲထုတ်သော bot များသုံးရန်အကြံပြုသည်။ "Utopia".
သို့သော်ပလက်ဖောင်းကို ၀ င်ရန် Graphical Interface ကိုသုံးရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းကိုသုံးနိုင်သည်။ "Utopia" တစ်ခု (သို့) ထို့ထက်ပိုသော စက်အတုများ (MV) for the same for အကြောင်း Mined bot များ လိုအပ်သည်။
Crypton (CRP) ၏အခမဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရရှိရန် faucet ကိုအသုံးပြုခြင်း
သို့သော်၊ သူတို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ public IP မရှိ၊ RAM အလုံအလောက်နဲ့အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အင်တာနက်မရှိလို့ Crypton ကိုသုံးပြီး Crypton ကိုမတူးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် Utopia ကိုသုံးပြီး Crypton ကိုအခမဲ့တစ်ကြိမ်ရဖို့ပိုလွယ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ GNU / Linux ကိုသုံးသောအခြားသူများအားဆုလာဘ် / အထောက်အပံ့ / ပေးဆပ်ရန်လှူဒါန်းနိုင်သောအရာများစွာတို့တွင်ရန်ပုံငွေများကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်အောက်ပါအဆင့်များကိုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်သာလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ utopia app ကိုဖွင့်ပါ။
ပေါင်းစပ်ထားသော Idyll web browser ကိုဖွင့်ပါ။
ရှာဖွေမှု / လိပ်စာဘားတွင် url "http: // faucet" ကိုရေးပါ။
အခမဲ့ Crypton (CRP) အပိုင်းအစများကိုရယူရန် open web interface ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ public key (wallet) ကိုထည့်ပါ၊ ပြထားသော captcha ကုဒ်ကိုဖြည့်ပြီး Crypton (CRP) သို့ပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ uWallet ချက်ချင်း
စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပြီး Utopia app ၏ uWallet တွင်ငွေလွှဲခြင်းကိုအတည်ပြုပါ။
နောက်ကွယ်ကအသင်းအကြောင်းပိုသိချင်ရင် "Utopia" နှင့်ပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင် "Utopia" အောက်ပါတို့ကိုသွားကြည့်နိုင်ပါတယ် သတင်းအချက်အလက်တရားဝင် link များ:
အခြားရွေးချယ်စရာ Website များ
Alternative Website Block Explorer အမေးအဖြေများ
အကယ်၍ သင်သိလိုသည်များနှင့်စူးစမ်းလေ့လာလိုသောကိစ္စများတွင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အခြားအသုံးဝင်သောအခြားရွေးချယ်စရာပရောဂျက်များ လက်ငင်းစာတိုပို့စနစ်များ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောယခင်ထုတ်ဝေမှုများသို့လင့်ခ်များကိုချက်ချင်းချန်ထားခဲ့ပါမည်။
Jami - အခမဲ့နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအတွက်ပလက်ဖောင်းအသစ်
Delta Chat - အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောအီးမေးလ်အခြေပြုစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်
Session: Open Source လုံခြုံတဲ့စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့ဒါကိုဆန္ဒရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း၊ ရွေးချယ်စရာနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော Project DeFi၎င်းကိုထိန်းသိမ်း။ တိုးတက်အောင်လုပ်လျှင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသုံးစွဲသူများအတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ GNU / Linux များ.
အထူးသဖြင့်ဆိုရင် "Utopia" သို့မဟုတ်အခြားသူများ DeFi စီမံကိန်းများ ဤအမျိုးအစားများကိုပေါင်းစည်းရန်စတင်နေကြသည် GNU / Linux Distrosမရ။ ဟုတ်ပါတယ်အရာအားလုံးကိုအစကနေအမြဲစပါတယ် DeFi စီမံကိန်းအတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်၊ လုံးဝပွင့်လင်းပြီးလွတ်လပ်ပါစေ။ ဤရှင်းလင်းချက်သည်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့် "Utopia" ၎င်းသည်လုံးဝလွတ်လပ်ပွင့်လင်းသောပရောဂျက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်စီမံကိန်းသည်ကောင်းစွာရင့်ကျက်ပြီးလူစည်ကားနေသည့်အခါအားလုံး၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအမျိုးအစားသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ DeFi စီမံကိန်းများ ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောလည်ပတ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ငွေရှာပါ အခြေခံ GNU / Linux များ ကောင်းမွန်သောပမာဏတစ်ခုနှင့်အတူတစ်မူထူးခြားသောသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင် crypto မှတဆင့် RAM မှတ်ဉာဏ် (4 GB) ရရှိနိုင်နှင့်aအင်တာနက်လိုင်းကောင်း ရိုးရှင်းသောနှင့်အတူ အများပြည်သူဆိုင်ရာ IPမရ။ အလွန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီးယခင်ဖော်ပြထားသောယခင်ထုတ်ဝေမှုတွင်ဖတ်နိုင်သောအရာနှင့်ယခင်စိတ်ကူးဖြင့်ပေါ်လွင်နေသည်။
Crypto: GNU / Linux ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာတည်ဆောက်ကြပါစို့။ Cryptocurrency နဲ့လား?
တိုတိုပြောရရင် "Utopia" ဒါဟာအေးမြပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် DeFi စီမံကိန်း အလွန်ကောင်းမွန်သည်သာမကကမ်းလှမ်းသည် အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် online tools များ၎င်းတို့၏ desktop (သို့) မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာများနှင့်၎င်းတို့အသုံးပြုသော Operating Systems များမည်သို့ပင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ သီးခြားကိစ္စတွင်ဖြစ်သည် Linuxeros နှင့် GNU / Linux Distros ၎င်းတွင်အမြတ်ထုတ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးရှိသည် Cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Utopia: Linux အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗဟိုကျသော P2P ဂေဟစနစ်
အကယ်စင်စစ်ဤပရောဂျက်သည်အခမဲ့သို့မဟုတ် open source ဖြစ်သည်။ ဒီပရောဂျက်အတွက်ကုဒ်ကိုမင်းမြင်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ကုဒ်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့သူကဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုငါတို့ဘယ်တော့မှသေချာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်လား။
မင်္ဂလာပါ Mnel မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း DeFi ပရောဂျက်သည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပွင့်လင်းမှုမရှိ၊ ၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာရှိသည်။ သို့သော်လည်း၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏ developer များက ၁၀၀% ပွင့်လင်းပြီးအခမဲ့တောင်ရနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အထူးသဖြင့် Linux အသုံးပြုသူများအတွက်စံပြအိုင်တီဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ရန်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာတိုးတက်ရန်နှင့်တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်။ ခုလောလောဆယ်တော့ခေါင်းစဉ်ကပြောသလိုပဲ "Linux အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ decentralized P100P ဂေဟစနစ်" ၎င်းကိုမအောင်မြင်ပါကအခြား developer များသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းများသည်အလားတူ ၁၀၀% အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော IT ဖြေရှင်းနည်းကိုဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ်
ဤအပလီကေးရှင်းရှိ ပိတ်ထားသော ရင်းမြစ်ကုဒ်သည် အလွန်သင့်လျော်သည် - Hacks နှင့် fork မည်မျှဖွင့်ထားသော အပလီကေးရှင်းများရှိသည်ကို သတိရပါ။ အရာရာတိုင်းတွင် အားသာချက် အားနည်းချက်များ ရှိသော်လည်း Utopia ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအောက်တွင် အရာအားလုံး ကောင်းမွန်စွာ ပြီးပြီဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
Keven ကို အကြောင်းပြန်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်
ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ Keven သင့်မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး Utopia နှင့်ပတ်သက်သည့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို ပြောပြပါ။
Utopia သည် ကျွန်ုပ်အသုံးပြုဖူးသမျှအားလုံးတွင် အကောင်းဆုံးဂေဟစနစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အမည်မသိ၊ တခြားဘာတွေလိုသေးလဲ။
မင်္ဂလာပါ အစ္စလာမ့်။ သင့်မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး ဤအက်ပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သင့်အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါ။
GameMaker Studio 2: Linux အတွက်ယခုရနိုင်သော 2D Games များအတွက် IDE တစ်ခု
Linux သို့အခြား operating system များ: လက်ရှိရွေးချယ်စရာ ၃ ခုရှိသည်